मादक पदार्थ सेवनले वीर्यस्खलनमा समस्या ल्याउछ ? - Everest Dainik - News from Nepal
मादक पदार्थ सेवनले वीर्यस्खलनमा समस्या ल्याउछ ?
प्रश्न : म ३३ वर्षकी भएँ । मेरो विवाह भएको ६ वर्ष भयो । मेरा श्रीमान् ३९ वर्षको हुनुहुन्छ । हाम्रो मागी विवाह भएको थियो । उहाँ सुरुदेखि नै यौनसम्बन्ध राख्नुअघि बियर वा रक्सी पिउन रुचाउनुहुन्छ । वियर वा रक्सी नपिई यौनेच्छा नै नहुने उहाँ बताउँनुहुन्छ । हिजोआज मलाई पनि ती कुरा पिउन कर गर्नुहुन्छ । बिस्तारै उहाँको यस्तो व्यवहार बढ्दै गएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारले मलाई दिक्क तुल्याउन थालेको छ । मलाई यस्तो व्यवहारले भविष्यमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । के मेरो डर साँचो हो ?
कतिपय मानिस बियर वा रक्सी पिएपछि आफू नजिकको व्यक्तिलाई आकर्षक देख्छन् । उनीहरू रक्सी पिएको व्यक्तिलाई पनि आकर्षक देख्न थाल्छन् । जो आफू आकर्षक नभएको महसुस गर्छन् उनीहरूले बियर वा रक्सी पिएपछि आकर्षक भएको महसुस गरेपछि त्यसको असरस्वरूप यौनसम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छन् ।
याे पनि पढ्नुस सेक्‍सप्रति अरुचि भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी समाधान गर्नस्
एक अनुसन्धानमा बियर वा रक्सी पिउन दिएपछि पुरुषलाई महिलाको तस्बिर तथा महिलालाई पुरुषको तस्बिर हेर्न लगाई उनीहरूको प्रतिक्रिया लिइएको थियो । बियर वा रक्सी पिएको तथा नपिएको अवस्थामा एउटै तस्बिर हेर्दा व्यक्त हुने प्रतिक्रियाका आधारमा नतिजा निकालिएको यो अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बियर गुगल भनिन्छ ।
रक्सी सेवनपछि शारीरिक प्रणालीको सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्न थाल्छ । रक्सी सेवनले खुसी भइन्छ वा रमाइलो हुन्छ भनिन्छ, तर यसको सेवनले दिक्दारीपन वा रिस बढ्न सक्छ । यसले सन्तुलन वा समन्वयमा पनि नकारात्मक असर गर्छ । मादक पदार्थ सेवनले स्खलनमा समस्या ल्याउने मात्र नभै नपुंसकतासमेत बढाउँदै लान्छ । रक्सीको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर आत्मबल घट्नु हो । परिणाम रु पुरुषको यौन व्यवहारमा नाटकीय असर देखा पर्छ ।
याे पनि पढ्नुस सेक्स सम्बन्ध ध्वस्त पार्ने प्रमुख पाँच कारण
याे पनि पढ्नुस बिदेशवाट आएपछि यौनसम्पर्क राख्छु भन्छ !
यदि तपाईंको श्रीमान्ले यौनसम्बन्धभन्दा अघि रक्सी सेवनलाई सहयोगी तत्त्वका रूपमा लिनुभएको छ भने त्यसले लामो समयपछि उहाँको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ । अर्को कुरा, यसले तपाईंहरूको आत्मीय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । यसले बिस्तारै यौन दक्षतामा कमी ल्याउनुका साथै एक–अर्काप्रतिको सम्मानमा पनि कम गर्छ । साप्ताहिकबाट
ट्याग्स: Drink, sexual relation